प्रविधि आहार: नयाँ वर्षको एउटा संकल्प किन हुनुपर्छ? | Rajmarga
जुनै पनि कुरा धेरै भयो भने त्यसको नकारात्मक असर सुरु हुन्छ। तर हामीमध्ये धेरै मोबाइललगायत अन्य प्राविधिक साधनसँग रहन पाउँदा खुशी हुन्छौं।
तर जसरी खानाका विभिन्न प्रकारहरू छन् त्यसरी नै प्रविधि पनि विभिन्न किसिमका छन्। ती प्रविधिहरूसँग स्वस्थ सम्बन्ध बनाउन तिनले हाम्रो दिमागमा पार्ने प्रभावबारे जान्न जरुरी छ।
सेरिटोनिन्- जब हामी इन्टरनेटमा जोडिएर सिर्जनात्मक भइ त्यहाँ केही लेख्न खोज्छौँ हाम्रो दिमागले सेरोटोनिन् रसायन उत्पादन गर्छ।
एन्डोर्फिन- यो शरीरको पीडानाशक र शान्ति कायम गर्ने स्नायु रसायन हो। जब हामी सजग रहन्छौं, ध्यान गर्छौं, कृतज्ञता व्यक्त गर्छौं, र कार्डियोभास्कुलर व्यायामको अनुभव गर्छौं तब यो रसायन शरीरमा उत्पादन हुन्छ।
अक्सिटोसिन- जब हामी इन्टरनेटमा जोडिएर अर्थपूर्ण आदान प्रदान गर्छौँ तब यो रसायन निस्कन्छ। सामान्य अवस्थामा यो स्वस्थ हो तर अनलाइनमार्फत् दुर्व्यवहार गर्नेहरूले यसको प्रयोग गरी पीडितको विश्वासमाथि घात गर्नसक्छन्।डोपामाइन- तत्काल पाइने इनाम वा प्रशंसाका कारण दिमागले यो रसायन निकाल्छ। डोपामाइन रसायनको उत्पादन बढाउने हेतुले प्रविधिको विकास गरिँदै आएको बताइन्छ।
एड्रिनालिन- यो रसायनले लडाइ र उडान स्थितिमा हाम्रो प्रतिक्रिया कायम गर्न मद्दत गर्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा मन परेको नपरेको र दाँजेको बेला यो रसायन निस्कन्छ।
कोर्टिसल- तनाव, निद्राको कमी, अति व्यस्तता र विचलित व्यक्तिहरूमा यो रसायनको मात्रा बढी हुन्छ।
हामीलाई प्रशोधन गरिएको र चिनीजन्य पेय पदार्थ नखान सुझाइन्छ। तर शुक्रवार राति आफ्ना छोराछोरीसँग पिज्जा वा पपकर्न खानु स्वीकार्य छ।
प्रविधि प्रयोगमा पनि यस्तै हुन्छ। यदि तपाईँको परिवारमा कसैलाई लत, चिन्ता, निराशा, वा समय व्यवस्थापनबारे समस्या छ भने तपाईँले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ। किनभने तपाईँले ती कुराहरूलाई हानिकारक लतमा बदल्न सक्नुहुनेछ।
Previous post: नेपाल्स लिटल स्टार २०१८ को ताज पहिरहन सफल भईन प्राश्ना थापा
Next post: नयाँ कुरा सिक्ने फरक फरक तरिका के के छन्?
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले पदबाट किन दिए राजीनामा ?